4 Train Travel Pre-Trip Essentials In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 4 Train Travel Pre-Trip Essentials In Europe
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 21/02/2020)
Chimwe chezvinhu zvinofadza pamusoro vaifamba mu Europe ndechokuti unogona kuwana ikoko nechitima kwose kwose. Ndicho Zvichakadaro kupfuura kwakapararira senga uye vanhu vazhinji kufarira kuti wokufamba kondinendi. Vanhu mibvunzo vasati vafunga tora chitima, pre-rwendo zvinokosha zvakadai apo ini kutenga matikiti? sei I kutarisa purogiramu? Ndinga kuyambuka kubva imwe nyika kune imwe? Ndezvipi usiku nezvitima se?
Heano pre-rwendo zvinokosha here kuziva:
Purogiramu uye Prices ose Zvitima European
Kunyange zvazvo vose Europe unesungano pedyo chaizvo zvakawanda chitima Network neimwe nyika ine njanji kambani yayo uye, saka, Website dzaro zvirongwa uye rate. Kana uchida kufamba nechitima mukati munyika iyoyo, pasina vachiyambuka chero muganhu, uchiri varumbidzwa ukaenda zvakananga kuti Save A Train sezvo ungaita navo Vols Skyscanner. Kana usingazivi chii, Google achakupa mhinduro. Inenge ose Websites vane Chirungu VERSION, saka zviri nyore kufamba uye kutarisa purogiramu. Kana uchida kufamba nechitima kubva imwe nyika kune mumwe (nguva dzose mukati Europe) unofanirawo kutsvaka nzira mune App kufanana Save A Train.
How uye Nguva Buy Tickets?
Mumwe pre-rwendo zvinokosha zvachose matikiti. Vamwe chitima ndima (kunyanya vaya kumhanya uye avo kuti batanidza misoro kana maguta makuru) vanowanzoda simuka mutengo kana yekubva dating Nzira; pane vamwe (omunharaunda nezvitima uye avo kuti vanobatanidza maguta pedyo) kuti nguva dzose chengeta chete mutengo. Kana uri parwendo kubva guta kuti guta, zvakanakisisa kutenga tikiti shomanana pachine kuwana zvakanakisisa mutengo. Kana ukatenga matikiti kuburikidza Apps (zhinji European chitima Makambani vane pachako Anwendung avo), muchapiwa wemagetsi tikiti ane QR code unogona kuratidza mutyairi kubva chidzitiro Foni yako, saka haufaniri kudhinda navo.
London kuna Lille Zvitima
London kuna Bordeaux Zvitima
The chakanaka pamusoro achifamba nechitima ndechokuti nhepfenyuro kazhinji pakati mumaguta uye vari nyore nokuda Metro, bhazi kana netsoka. Haufaniri kuenda kweawa kuenda yendege (kana uri kumucheto kweguta, kunyange zvavo hazvina zvinotora refu kudaro). Kana iwe kufamba zvishoma mukwende, unogona kuenda mabhazi. Kana iwe uri monica chaizvo, zvichida tekisi ndiyo yakanakisisa nezvechisarudzo. Hazvina kurwadzisa kutaura nayo: pane maguta kuti ave akawanda chitima dzemapurisa (semuyenzaniso, Paris) saka nguva dzose kuva nechokwadi chei chitima yako ngaubve. Dzimwe nguva zvinogona kuitika kuti unofanira kubvisa kubva chiteshi mumwe.
Berlin kuna Munich Zvitima
MuFrankfurt kuna Munich Zvitima
Vienna kuna Munich Zvitima
Stuttgart kuna Munich Zvitima
Kubata Nguva dzose Zvitima mu Europe
nezvitima European ibvai panguva chaiyo miniti (kana pane kunonoka vamwe okunze chikonzero). Kusvika yemapurisa pamusoro 15-20 maminitsi pamberi nguva dzose mumwe pre-rwendo zvinokosha. Yeuka kuti pane nezvitima kuti vari refu kwazvo uye dzimwe nguva iwe vachafamba zvakawanda kusvika kumagumo pechikuva. The Kumira pakati rimwe guta uye mumwe havawanzosarudzi refu kupfuura maminitsi mashoma.
Izvi kaiva asi zvinobatsira mutungamiriri pamusoro pre-rwendo zvinokosha kuti nechitima rwendo muEurope uye nezvinhu zvaunazvo kuziva asati asarudza kutora rimwe. Tinovimba kuti ruzivo Makawana uchava inokosha.
Enter Save-A-Rovedzai kuti bhuku rako chitima tikiti kune kwataizoenda 3 maminitsi, panguva yakachipa pashiri chitima matikiti rates kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/4-train-pre-trip-essentials-europe/- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / von kana / nayo uye mimwe mitauro.
#mukwende #packing europeantravel Train Travel chitima rwendo